हस्तमैथुन गर्न कस्ले रुचायछन केटा कि केटी - Talk Nepal
हस्तमैथुन गर्न कस्ले रुचायछन केटा कि केटी
१२ कात्तिक, काठमाडौं । हस्तमैथुन किशोरावस्थामा हुने आम यौन व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ ।
हस्तमैथुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी रु
जीवनसाथीसंगको सम्वन्ध स् जो महिला अत्यधिक हस्तमैथुन गर्छन् उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा नकारात्मक हुन् सक्छ । अर्थात श्रीमान्संगको सम्वन्धमा दरार उत्पन्न हुनसक्छ । किनभने हस्तमैथुनको लतमा फसेका महिलाले विहेपछि पनि पतिसंगको यौन सम्वन्धमा रोमान्स गर्न रुचाउँदैनन् ।
छटपटी बढ्छ स् हस्तमैथुन गर्ने बानी परेका महिलाहरुमा तनाव तथा चिडचिडाहट बढछ । यस्ता महिलाहरुले यदि कुनै कारणबस हस्तमैथुन गर्न नपाए छटपटी बढछ ।
हीमेच्युरिया हुनसक्छ स् हस्तमैथुन गर्ने महिलाहरुलाई हीमेच्युरिया नामको विरामी हुनसक्छन् । यस्तो विरामी महिलाहरुमा पिसावबाट रगत आउन सक्छ ।
महिनावारीमा गडबढी देखिन सक्छ स् नियमित हस्तमैथुन गर्ने महिलामा महिनावारीमा गडबढी हुनसक्छ । गुप्तांङमा शुखापन हुनसक्छ ।
. एजेन्सीको सहयोगमा
कसरी बन्दो रहेछ कण्डम ? भिडियो